Warshadaha iyo soo -saareyaasha dareeraha dhadhanka leh ee jumlada leh ee jumlada leh Weiti
Iibinta Kulul ee Dheecaanka Dheecaanka leh ee Dheecaanka leh
1, 12 midabyo dhalaalaya dibnaha
2, U adkaysiga u adkaysiga iyo dhunkashada
3, Khibrad leh oo lagu farsameeyay qaacido cusub
4, Qoyaanka, quruxda dumarka
12 midab oo dhalaalaya dibnaha
Koobkii Aan Joogtada Ahayn
Qoyaan, Quruxda Haweenka
Looma laha astaan, Aqbal summada gaarka ah
Naqshadeynta astaanta iyo hagaajinta
U adkaysiga u-adkaysiga iyo dhunkashada-dhunkashada, dhabarta dibintu waxay la timaadaa usha isbuunyo leh, oo ka dhigaysa dalabka riyo siman oo aan dadaal lahayn. Waxaa lagu dhammeeyaa midabada HD, midabka dibinta ayaa xitaa si geesinimo leh oo faan leh uga soo muuqan doona kaameradda qeexidda sare leh, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon dadka ka shaqeynaya xirfaddooda vlogging-ka, ama kuwa qabatimay selfie.
Si khaas ah loogu farsameeyay qaacido cusub oo isku daraysa midabka hodanka ah ee aan qallajin, codsi siman iyo qaab-dhismeed jilicsan oo aan miisaan lahayn, lipstick-ku wuxuu ku dheregsan yahay ka-qaadkaaga qiyaasta mega-oo ah midabka cad ee cad oo aan dillaaci doonin, libdhi doonin ama soo bixi doonin illaa siddeed saacadood. Intaas waxaa sii dheer, waa qoyaan iyo shaabadayn biyo si loo ilaaliyo jilicsanaanta.
Jir-kareem kareem ah oo dareere ah oo leh dareere karbaash leh oo raaxo leh oo ku dabool bushimahaaga midab midab leh oo leh hal siibasho oo ka mid ah codsadaha suufka leh. Qaaciddo aan dhegdheg lahayn oo keligeed la gashan karo ama in ka badan lipstick-ka aad jeceshahay.
LABO GLOSS MALAALAHA GADIIDKA OO GADAN
1. Naqshadeynta astaanta bilaashka ah: Haddii aad leedahay astaan ​​kuu gaar ah, fadlan noogu soo dir faylka PDF ama qaab AI ah. Haddii aadan lahayn astaanta, fadlan noo sheeg fikradahaaga ku saabsan astaanta. Kooxdayada naqshadeynta ayaa kaa caawin doonta sameynta astaanta.
2. Midabka la habeeyay: Waxaan leenahay midabyo kala duwan oo lipgloss ah ikhtiyaarkaaga. Nala soo xiriir shaxda midabka.
3. Tubbada weelka weelka dhalaalaya ee dibnaha: Qaabka tuubada weelka, waxaan haysannaa kayd diyaarsan oo ballaadhan, sidoo kale waxaad ku habayn kartaa astaantaada gaarka ah tuubada lipgloss.
4. Sanduuqa baakida dhalaalka ee qaaska ah: Sanduuqa baakadaha dhalaalaya dibnaha ayaa sidoo kale loo heli karaa astaanta gaarka ah.
Hore: Jumlada Jaadka Biyo -La'aanta ah Calaamadda Gaarka ah ee Matte Lip Gloss Vendor
Xiga: Calaamadda Gaarka ah Indhashareerrada Been Abuurka leh ee leh Eyeliner Magnetic
Qurxinta Quruxda Qurxinta Qurxinta
Faruur Faruur Leh
Soo -saaraha Faruuryaha Faruuryaha
Calaamadda Faruuryaha Calaamadda Gaarka ah
Daad -biyuhu Custom Label Astaanta Gaarka ah ...
New Custom Imaanshaha 55 Colors No sumad gaar G ...
Custom Jumlada Qaawan Base Base Astaanta Gaarka ah ...
3D Logo Custom Clear Mascara Labe Gaarka ah ...
Fashion Logo Custom 12 Midabada Vegan Glitter Lip ...
jeedal mink, dibinta, indho -dejiye, Iibiyeyaasha Indhaha, Kordhinta Indhaha, Jeexa indhaha,